रेमिटेन्समा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि - khabarxpress.com
२०७८, ३१ जेष्ठ सोमबार १९:५१ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १८६१ पाठक संख्या
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिटेन्स) १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८०९ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। हाल विप्रेषण आप्रवाह र कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको अनुपात २०.५३ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो। यस्तै, समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने ६०.३ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यसको संख्या २.७ प्रतिशत मात्र घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको कर राजस्व रु.७०९ अर्ब ६२ करोड, गैर कर राजस्व रु.५१ अर्ब ३८ करोड र.४६ अर्ब ४ करोड अनुदान र अन्य भुक्तान गरी कुल रु. ८०७ अर्ब ४० करोड परिचालन भएको छ।
साथै, खर्च तर्फ चालु खर्च रु. ६३० अर्ब २० करोड, पूंजीगत खर्च रु. १२५ अर्ब ८८ करोड र वित्तिय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च रु.६८ अर्ब ७२ करोड गरी कुल रु. ८२४ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको छ। सरकारको राजस्व संकलन र खर्च लक्ष्यको क्रमश ७५.३ प्रतिशत र ५५.९३ प्रतिशत रहेको छ।
साथै, यस अवधिमा सरकारले रु. २० अर्ब ५० करोड ट्रेजरी बिल, रु.९० अर्बको बिकास ऋणपत्र, रु.२ अर्बको नागरिक बचतपत्र र रु.१ करोड ५३ लाखको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी कुल रु.११२ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।